Ahoana no hifehezana ny valin'ny fikarohana Amazon?
Ny hizaka ny valin'ny fikarohana Amazon dia iray amin'ireo nofinofin'ireo orinasa an-tserasera. Ny laharana voalohany dia afaka mamaritra raha toa ka misy vokany amin'ny fivarotana 30+ isan'andro isan'andro na 1 na 5 isam-bolana. Misy antony maro hafa mahatonga ny maha-zava-dehibe ny manamarina ny valin'ny fikarohana Amazon. Anisan'izany ny fanamafisana ny varotra, ny Amazon azonao atao ny mandresy ny boaty, ny fanatsarana ny fampitomboana ny marika, sy ny sisa.
Mba hanjaka ny pejy am-pikarohana Amazon, mila mandresy ny mpifaninana ianao ary mamorona sary marika tsara. Ilainao ny mahafantatra fitsipika volamena vitsivitsy sy teknikam-pahaizana mampikorontan-tsaina mba ho ao amin'ny TOP. Ankoatr'izay, tokony hanontany tena foana ianao hoe "Inona no tadiavin'ny Amazon ary nahoana?" Ary mitazam-pandinihina ny filàn'ny mpanjifa sy ny faniriany. Aza manandrana milalao ity rafitra ity raha tsy misy ny lalao very.
Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba amam-panao fotsiny ny fomba hanosehana ny vokatra Amazon-tsika ho any amin'ny TOP amin'ny valin'ny fikarohana. Andeha àry isika handroso.
Teknikam-pahefana hifehezana ny valin'ny fikarohana amazonaly
Ny vokatra azo avy amin'ny varotra
Ny fivarotana dia ny mahazatra fotsiny ny zavatra sarobidy ary mitondra tena sarobidy ho an'ny mpanjifany. Ny fitadidiana ny zavatra ilain'ny mpanjifa ary manome azy ireo ny traikefa tsara indrindra dia fitsipika volamena avy amin'ny Amazon mivarotra. Izany no antony ilainao hahazoanao antoka fa ny vokatra azonao amidinao na ny fikasana hivarotra dia tena tsara. Ireo mpikaroka amazonin'i Amazon dia tokony omena ny traikefa mpanjifa tsara indrindra satria izy io no algorithm indrindra amin'ny fanivanana ny vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra. Isan-taona dia i Amazon dia mahazo vola an-tapitrisa dolara avy amin'ny mpanjifa mividy ao amin'io sehatra varotra manerantany Izany no mahatonga ny mpanjifa manara-maso ny tsenan'ny tsenan'ny Amazon e-commerce. Noho izany, raha mivarotra zavatra tsy misy vidiny ianao, ny tanjona voalohany amin'ny Amazon dia ny hanala ny vokatrao avy amin'ny SERP. Ary farany, tokony ho fantatrao fa raha mivarotra zavatra tsy misy vidiny ianao, dia tsy misy fikajiana hafa mety hiasa ho anao.
Ny fivarotana bebe kokoa
Ny fivarotana bebe kokoa dia midika ny lanjany ambony indrindra amin'ny pejy finday Amazon. Araka ny voalazan'ny algorithm any Amazonia, ny vokatra rehetra amin'ny habetsahan'ny fivarotana dia tokony hapetraka ao amin'ny TOP satria izy ireo dia mety hitondra vola bebe kokoa ho an'i Amazon. Ny Amazon Sales Rank dia manondro ny mari-pahaizana ara-pahasalamana voalohany ary mitana andraikitra mitovy amin'ny PageRank ao amin'ny Google. Na dia izany aza dia ilaina ny manamarika fa ny laharana varotra dia tsy mifandray amin'ny teny fototra ampiasaina amin'ny fikarohana. Vao mainka mitazona ny volan'ny varotra amin'ny vokatra vokatra.
Tokony ho azonao fa ny fitomboan'ny varotra dia toe-tsaina, fa tsy ny tanjona farany amin'ny business Amazon. Amin'ny maha mpanjifa kandida anao, tokony hieritreritra ela be ianao ary mikaroka ny fahafahana hahazo fifamoivoizana avy amin'ny loharano ivelany toy ny Google, Bing ary ny tambajotra sosialy ary koa ny sehatra elektronika hafa. Izany dia hanampy anao hihoatra ny avo kokoa noho ny mpifaninana ambony laharana niche Source .